Customer အထောက်အကူပြု - Watch TV Shows, Videos Online with Cookie TV
Q.Cookie TV ဆိုတာဘာလဲ?
Cookie TV ဆိုတာရုပ်သံလိုင်းပေါင်းများစွာနှင့် ရုပ်ရှင်ကားများကို မိမိသွားလေရာ အလွယ်တကူသယ်ဆောင်သွားပြီး ကြည့်လို့ရတဲ့ Mobile TV အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်။
Q.Cookie TV ကိုဘယ်မှာကြည့်လို့ရနိုင်လဲ?
Cookie TV ကိုမိမိ၏ Mobile Devices တွေကနေတစ်ဆင့် အလွယ်တကူကြည့်လို့ ရပါတယ်။
Q.Cookie TV မှာဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလဲ?
ကျွန်တော်တို့ Cookie TV မှာဆိုရင်ဖြင့် နိုင်ငံတကာသတင်းများ၊ အားကစား သတင်းများ၊ ရုပ်သံဖျော်ဖြေရေးဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကလေးများအတွက် အထူးအစီအစဉ်များနှင့် ရုပ်ရှင်ကားများကိုပါ တနေရာတည်းကြည့်ရှု ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတော့ အဓိကအားဖြင့် တစ်ကားချင်းစီကြည့်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ မတူညီတဲ့စျေးနှုန်းတွေရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာရွေးချယ်ဝယ်ယူကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Cookie TV မှအထူးစီစဉ်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်စုစည်းမှုဟာဆိုရင်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော Hollywood ရုပ်ရှင်တွေကို အကန့်အသတ်မရှိကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ "Movie Album" ကိုသပ်သပ်ဝယ်ယူလို့ရသလို၊ အခြားအစီအစဉ်တွေနှင့်တွဲဖက်ပြီးလဲ စျေးသက်သာစွာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်
Q.Cookie TV အကောင့်ကိုဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲ?
Cookie TV app လေးကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် ပထမဆုံး Facebook Account ကိုအသုံးပြု၍ Sign up လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအဆင့်အနေနှင့် မိမိဖုန်းနံပတ်ကို အတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Device တစ်ခုတွင် Facebook Account တစ်ခုနှင့်သာ ချိတ်ဆက်လို့ရပေမယ့် Cookie Account တစ်ခုကို Device သုံးခုအထိအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ သတိထားရမှာက Device သုံးခုလုံးမှာ တပြိုင်တည်းကြည့်လို့မရပါ။
ဒီကိစ္စကိုပြောဖို့ စိတ်မကောင်းပေမယ့်လဲ ပြောရမှာဘဲလေ။ အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Facebook ကနေအကောင့်လျှောက်တာမှအပ တခြားအကောင့်လျှောက်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းတွေမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနှင့် Cookie TV မှ သူရဲကောင်းတွေက သုံးစွဲသူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေနေပါတယ်။
Q.Cookie TV ကိုဘယ်ကနေ Download ရမလဲ?
ပထမဆုံး App Store ကိုသွားပြီး "Cookie TV" ကိုရှာလိုက်ပါ။ Cookie TV လေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဆက်ပြီး ဘာမှမစဉ်းစားပါနှင့် install ခလုတ်ကလေးကိုနှိပ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလေးတွေကို စတင်သုံးစွဲကြည့်လိုက်ပါဗျ။ အော်.. ဒါနှင့်လေ သတင်းကောင်းတစ်ခုရောကြားပြီးပြီလား။ ပထမဆုံး Sign Up လုပ်တဲ့လူတွေကို ငွေတစ်သောင်းနှင့်ညီမျှတဲ့ Cookies "10,000" ကိုပေးနေပြီးဆိုတာကိုလေ။ ကဲဘာတွေစောင့်နေမှာလဲ။
Q.Cookie TV ကိုဘယ်လို Device တွေကနေကြည့်လို့ရနိုင်မလဲ?
"Cookie TV ကို Android နှင့် iOS Devices တွေမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ မိမိ၏ Device မှာအသုံးပြုဖို့အတွက် အောက်ပါအချက်လေးတွေပါရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Android အသုံးပြုသူတွေဆိုရင်တော့ Device Hardware မှာ CPU 1.2GHz ထက်မနည်းရှိပြီး RAM အနေနှင့် 1GB နှင့်အထက်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Device Software ပိုင်းမှာတော့ Android Operating System : Android 5.0 (Lollipop) နှင့်အထက်ဆိုရင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် iOS 10.0 နှင့်အထက်ရှိတဲ့ iPad, iPad Mini, iPhone နှင့် iPod Touch တွေမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်"
Q.Registration လုပ်တဲ့အခါမှာ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဘာလို့လိုအပ်တာလဲ?
Cookie TV ကိုအသုံးပြုတဲ့ အသုံးပြုသူတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့အတွက် Cookie TV မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖုန်းနံပတ်ကို ထည့်သွင်းဖို့ အကြံပြုထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သတိပြုရမှာက Cookie Account တစ်ခုကို ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုတည်းကိုသာ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖုန်းနံပါတ်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မိမိ အကောင့်မှန်ကန်ကြောင်း မေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေနိုင်မှသာ Customer Service မှပြောင်းပေးမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို လွတ်သွားလို့စိတ်ညစ်နေပြီးလား။ ကဲစိတ်မပူပါနှင့်တော့ အဲ့ဒါတွေအာလုံးအတွက်အဆင်ပြေနိုင်အောင် သူများတွေထက် တမူထူးခြားတဲ့ "catch-up" အစီအစဉ်ကို Cookies TV မှထည့်သွင်းထားပေးပါတယ်နော်။ ဒီအစီအစဉ်နှင့်ဆိုရင် ကိုယ်လွတ်သွားတဲ့ ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို ထုတ်လွှတ်ပြီး ၁ ပတ်အတွင်း Cookie TV မှာပြန်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။
Q.Cookie TV မှဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေကိုရနိုင်မလဲ?
Cookie TV မှာယခုလောလောဆယ်တော့ တိုက်ရိုက်ရုပ်သံအစီအစဉ်နှစ်မျိုး၊ ရုပ်ရှင်စုစည်းမှုနှင့် တစ်ကားချင်းကြည့်ဆိုပြီးရနိုင်ပါတယ်။
ရက် ၃၀ ကို Cookies 4,900 နှင့်သတ်မှတ်ထားသော ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်အပြင် "Catch Up" ဝန်ဆောင်မှုကိုပါအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ထိရှအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုပြီး ရုပ်သံလိုင်းအားလုံးနှင့် "Catch Up" ဝန်ဆောင်မှုကိုပါထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး၊ ရက်သုံးဆယ်ကို Cookies 7,900 ဘဲကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်
Q.“Movie Album” ဆိုတာဘာလဲ?
"Movie Alubm" ကိုဝယ်ယူမည်ဆိုရင်တော့၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကို အကန့်အသတ်မရှိဘဲ ရက်သုံးဆယ်အတွင်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ "Movie Album" ကို သီးသန့်ဝယ်ယူမည်ဆိုလျှင် ၂၀၀၀ ကျပ်ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး၊ ရုပ်သံအစီအစဉ်နှင့် တွဲဖက်ဝယ်ယူမည်ဆိုလျှင်တော့ ၁၀၀၀ ကျပ်သာ ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Q.“Pay Per Movie” ဆိုတာကရောဘာလဲ?
"Pay Per Movie" ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ပုံမှန်လစဉ်ကြေးပေးနေရမှာ မဟုတ်ဘဲ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရုပ်ရှင်ကားကို ရွေးချယ်ငှားရမ်းကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Q.ကျွန်ုပ်ဝယ်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကို “My Library” ထဲမှာဘယ်လောက်ကြာကြာသိမ်းထားလို့ရနိုင်မလဲ?
မိမိဝယ်ယူထားသောရုပ်ရှင်ကားတွေကို စတင်ဝယ်ယူသည့်နေ့မှ ရက်သုံးဆယ်အထိသိမ်းထားလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စပြီးကြည့်ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့၊ ၇၂ နာရီအတွင်းပြီးအောင် ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Q.Cookie TV မှရုပ်ရှင်ကားတွေကို Download လုပ်လို့ရပါသလား။
ရတာပေါ့! Cookie TV မှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ကား တစ်ကားချင်းကြည့်ထဲမှ "Disney" က ထုတ်လုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားများမှအမ အခြားရုပ်ရှင်ကားတိုင်းကို "Download" ဆွဲပြီးကြည့်လို့ရတာပေါ့။ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားကို ငှားပြီးတာနှင့် "Download Button" လေးကိုနှိပ်ပြီး အလွယ်တကူ "Download" လုပ်လိုက်ရုံပါဘဲ။ WiFi ရှိတဲ့နေရာတွေမှာ ကြိုက်သလောက် "Download" ဆွဲပြီး၊​ "Mobile Data" ကိုချွေတာလိုက်ပါနော်။ ကိုယ် Download လုပ်ထားတဲ့ကားတွေကို "My Downloads" အောက်မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင််ပါတယ်
Q.“Referral Program” ဆိုတာဘာလဲ?
Cookie TV ကိုဘယ်လောက်ထိ သဘောကျလဲဆိုတာကို သက်သေပြရင် "Bonus Cookies" လေးတွေကိုရယူလိုက်ပါ။ သင့်သူငယ်ချင်းတွေကို Cookie TV ကို Install လုပ်ပြီး Sign up လုပ်ခိုင်းတာနှင့် "Bonus Cookies 1,000" ကိုရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Code လေးကတော့ Profile ရဲ့ဘေးမှာ ရှိပါတယ်။ လွယ်ကူစွာ Copy/ Paste လုပ်ပြီး သင့်သူငယ်ချင်းတွေကို အခုဘဲပို့လိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် "Refer & Earn" ကိုနှိပ်ပြီး "Share Your Code" ကိုရွေးချယ်ကာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Application ကနေလဲပေးပို့လို့ရပါသေးတယ်။
Q.သူငယ်ချင်းတွေဘယ်လောက်များများကို Refer လုပ်ပြီး Cookies တွေရနိုင်မလဲ?
Refer လုပ်နိုင်တဲ့ မိသားစုဝင်တွေနှင့် သူငယ်ချင်းတွေကို ကန့်သတ်ထားခြင်းတော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သတိပြုရမှာက Referral Program ကရရှိလာမည့် "Cookies" တွေက "Bonus Cookies တွေဖြစ်ပြီး၊ ရလာတဲ့ Cookie တွေကို လွှဲပြောင်းပေးလို့မရသလို သက်တမ်းအနေနဲ့ကတော့ ရက် ၃၀ အတွင်း သုံးစွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Q.လက်ရှိဝယ်ယူထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Upgrade လုပ်လို့ရမလား?
Cookies TV က ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို လစဉ်ကြေးကြိုတင်ပေးသွင်းရတာဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး ရက် ၃၀ သက်တမ်းရှိပါတယ်။ အစီအစဉ်အသစ်တစ်ခု ထပ်မံဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ယခုလက်ရှိဝယ်ယူထားတဲ့အစီအစဉ်သက်တမ်းကုန်သည့်အခါမှ ဝယ်ယူလို့ရသလို၊​ သက်တမ်းမကုန်ခင်မှာလဲ ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။ အသစ်ဝယ်ယူထားတဲ့ Plan သည် ဝယ်ယူသည့်နေ့မှစပြီး အကျုံးဝင်ပါသည်။
Cookie တစ်ခုကို တစ်ကျပ်နှင့်ညီမျှပါတယ်။ ဒါကြောင့် Cookie ၂၀၀၀ ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ၂၀၀၀ ကျပ်အသုံးပြုရမှာပေါ့။
ရှိတာပေါ့။ အနည်းဆုံး Cookie တစ်ထောင်ကနေစတင်ဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပြီး၊ ၁၀၀၀ ထည့်ပြီးရင်တော့ ၁၀၀ ချင်းစီတိုးပြီးဝယ်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Cookie တွေကိုဝယ်ယူဖို့အတွက် "Menu" ထဲမှ "Fill Your Cookie Jar" ကိုနှိပ်၍ မိမိပေးသွင်းလို့သောပမာဏကိုငွေကျပ် "၁၀၀၀" မှစ၍ "၁၀၀" ဆီတိုးပြီးဝယ်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီး "Cookies" တွေကိုဝယ်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်: 1. KBZ Bank 2. MPT, Telenor, Ooredoo & MyTel 3. Wave Money 4. OK Dollar
Q.Cookies တွေကိုမသုံးဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင် ငွေပြန်အမ်းပေးပါသလား။
မသုံးဖြစ်တဲ့ Cookies တွေအတွက်ငွေပြန်အမ်းပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လက်ကျန် Cookies တွေကိုတော့ မိသားစုဝင်တွေနှင့် သူငယ်ချင်းတွေကို လက်ဆောင်ပေးလို့ရပါတယ်။
Cookies တွေကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ မိသားစုတွေနှင့် သူငယ်ချင်းတွေအပေါ် သင်ဘယ်လိုတန်ဖိုးထားလဲပြောပြဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်သူတို့က ရုပ်သံလိုင်းတွေနှင့် ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ ဝါသနာအိုးတွေဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့။ “My Cookies” ရဲ့အောက်မှာ “Gift Cookies” ဆိုတာလေးကိုနှိပ်၊ ပြီးလျှင် Cookies ပို့လို့ရမယ့် application လေးတွေကျလာပါလိမ့်မယ်။ နှစ်သက်ရာ Application ကနေ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့လူဆီကို ပို့ချင်တဲ့ပမာဏကိုထည့်သွင်းပြီးပို့လို့ရပါတယ်။
Q.မေတ္တာလက်ဆောင် Cookies တွေကဘာလဲ?
Promotion အစီအစဉ်တွေမှာလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးတဲ့ Cookies လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် Cookies နှင့်မတူတဲ့အချက်ကတော့ မေတ္တာလက်ဆောင်ရတဲ့ Cookies တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးလို့မရပါဘူး။ တခြားတစ်ယောက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးလို့မရသလို၊ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို တခြားတစ်ယောက်ကို ဝယ်ယူပြီး လက်ဆောင်ပေးလို့မရပါ။ သတိထားရမှာကတော့ မေတ္တာလက်ဆောင်ရရှိထားတဲ့ Cookies လေးတွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာသာ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Q.Coupon Code ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ?
ပထမဆုံး Menu ထဲမှ "My Promo" ကိုနှိပ်ပါ၊ ပြီးလျှင် "Register Promo Code" ကိုနှိပ်ပြီး Coupon Code ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုပါ။ ရရှိထားတဲ့ Cookies ပမာဏကိုအတည်ပြုထားတဲ့ စာလေးရောက်လာပါလိမ့်မယ်
Q.Catch-up service ကဘာလို့ Cookie TV ရဲ့ TV Channel တိုင်းမှာအသုံးပြုလို့မရတာလဲ?
ရုပ်ရှင်နှင့် ရုပ်သံလိုင်းများ၏ မူပိုင်ခွင့်ကိုင်ဆောင်သူ၏ သဘောတူညီချက်နှင့် ပေါ်လစီများအရ အချို့ရုပ်သံလိုင်းများတွင် Catch-up ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြု၍မရနိုင်ပါ။
Q.တစ်ကားချင်းငှားကြည့်ရမယ့် ရုပ်ရှင်တွေထဲကအချို့ရုပ်ရှင်ကားတွေကို ဘာလို့ Download ဆွဲလို့မရတာလဲ?
Cookie TV မှရုပ်ရှင်ကားတိုင်းကို Download ဆွဲ၍ကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ထားပေမယ့်၊ မူပိုင်ခွင့်ကိုင်ဆောင်သူ၏ Policy အရ တစ်ချို့ရုပ်ရှင်ကားများမှာ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရပြီး Download ဆွဲလို့ရမည်မဟုတ်ပါ။ သတိပြုရမှာက Cookie TV မှာ Download လုပ်လို့မရသောရုပ်ရှင်ကားများကို အခြားမည်သည့် OTT ဝန်ဆောင်မှုတွင်မဆို Download လုပ်လို့ရမည်မဟုတ်ပါ။